प्रकाशित मिति : : शुक्रबार, अशोज १९, २०७५
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) मा लोकतन्त्र , गणतन्त्र , संघीयता , धर्मनिरपेक्षता ,समाजिक न्याय , समावेशीता समानुपातिक र समाजवादउन्मुख जस्ता राजनितिक उपलब्धिका सिद्धांत स्थापित भएका छन । यी उपलब्धि नेपाली समाजको हिसाबले र आधुनिक नेपाल निर्माणका लागी निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन ।
यी उपलब्धि हासिल गर्नका लागी नेपाली समाज र नेपाली जनताले निकै कष्टकर संघर्ष गर्नु पर्यो नेपालका पहिला सहिद लखन थापा देखी विभिन्न आन्दोलन र यूद्वमा नेपाली जनताका छोराछोरी , श्रीमान श्रीमती , आमाबुबा ,दाजुभाइ, दिदिबहिनी र इष्टमित्रहरूले आफ्नो ज्यानको आहुती दिनु पर्यो । कुनै समयमा भौगोलिक संघर्ष त कुनै समयमा राजनीतिक अधिकारको लडाइमा आफ्नो पसिना र खुन नेपाल आमाको लागी बगाएको इतिहासका साक्षी छौ हामी ।
भौगोलिक एकीकरणको यूग र लोकतान्त्रिकरणको यूगको अनत्यमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान घोषणा संगै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभुती गरे आम नेपाली जनताले । मुलतः राजनीतिक अधिकार स्थापित भएका पनि छ्न । आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा प्रवेश गरेको छ । तर
नेपाली जनताले गरेको आशावादी यात्रामा ठेस लाग्न सक्ने र लगाउन सक्ने संकेत पनि उत्तिकै तिर्मिराउन्छ्न ।अनि उत्तिकै हौसिएका छ्न पनि । जब जब नेपाली जनताको योगदानको मुल्यांकन हुन्छ तब तब नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ती संकेत नदेखिएको भन्ने होइन । चाहे त्यो २०१५ होस चाहे २०३६ होस चाहे २०६५ देखी २०७१ सम्म होस । यी सबै कालखण्डमा नेपाली जनताको हार भएको इतिहास छ ।
अथवा हाम्रो नेतृत्व चुकेको छ ।कि हामीले चुकाएका छौ ? किन कि नेतृत्व निति र कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र बिचको अन्तर दोन्द्व र अनि एक्टिभिजम कार्यकर्ता र समपर्णवाद कार्यकर्ता बिचको अन्तर दोन्द्व नै मुख्य कारण देखिन्छ । उदाहरण को लागि विपि को प्रजातान्त्रिक समाजवाद , मदनकुमार को जनताको बहुदलीय जनवाद , प्रचण्ड को जनगणतन्त्र र बाबुराम भट्टराई को समुउनन्त समाजवाद लाई अध्यन नगरी विरोधको लागी विरोध गर्नु अनि असफल पार्ने चरम कोशिश गर्नु पनि नेपाली जनताको हार हो भन्ने कुरा नेपाली इतिहासले प्रमाणित गरेको छ र गर्दै जानेछ
अब संविधान जारी पश्चयात बनेको कम्युनिस्ट पार्टी को दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकार देशमा विध्यमान छ । समृद्ध नेपाल सूखी नेपाली नारा छ तर संकेत पुरानै छ । कारण हामीले माथी उल्लेख गरे झै पुरानो जगमा नयाँ आर सि सि भवन निर्माणको कल्पना गर्दै छौ । जनता लाई अनगिन्ती सपना बाड्नमा व्यस्त छौ । एक्टिभिजम कार्यकर्ता र समपर्ण कार्यकर्ता विचको फरक छुट्याउन सकेका छैनौं । गणेश हनुमानको भक्त बन्दै छ सरकार विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलिको विकास गर्दै छ प्रतिपक्षी ।
दिनमा १९०० हिसाबले नेपाली दक्ष यूवाहरुखाडी मुलक तिर जादै छन । लगभग करोड सेरोफेरोमा श्रमिक यूवा भारतमा पलायन छ तर हाम्रो देशमा २०३० मा दरखास्त दिएका पुर्णरूपमा पंचायतले नुन गुन लगाएका अधिकांश कर्मचारी छन । के पंचायतको छाहारी मा हुर्केको र पंचायतको नुन चाखेको कर्मचारीले हाम्रा नेताले भने जस्तो । गणतन्त्र नेपाल मा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा सफल बनाउनेतर्फ जान सक्छ अथवा जान चाहान्छ ? के हनुमान र गणेश प्रवितीका संपर्णवाद कार्यकर्ताले सरकारलाई सहि र अध्यनशिल सुझाव र सल्लाह दिन सक्छ । राजनीति भनेको नै दोस्रो दलको विरोध गर्नु पर्छ भने राजनीति चेतनाले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छ । कार्यकर्ता नेता बिचको सम्बन्ध मालिक र नौकर जस्तो आदेश लिने र दिने शैलिले जनताको समस्यमा दल अगाडि बढन सक्छ ? जस्को उदाहरण भकर समाननिय प्रधानमन्त्री ले कार्यकर्ता लाई दिएको अंरियालर माहुरी बन्न भनी दिएको आदेशले प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रमा विरोध रक्षा प्रतिरक्षा हुन्छ तर राजनीतिक रूपमा । एजेन्डा विहीन प्रतिपक्षीका संपणवादी कार्यकर्ताले सोही अविव्यक्ती लाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर विरोध गरेको देख्दा त झनै लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ ।
देश र जनताको नाममा राजनीति गर्ने अध्यनशिल दल र नेताको खडेरी छ् आज नेपालमा । आदेश लिने र आदेश दिने नाममा मात्र आज नेपाली जनताको पसिना बाट उठेको
करको चरम दुरुपयोग हुँदै छ । अरबौ रुपैया भ्रष्टाचारमा स्वाह! हुँदै छ । विरोध गर्नु मात्र राजनीति हो भन्ने कुरा को विकास हुँदै छ । हत्या ,बलात्कार , तोडफोड , आगजनी र धाक धम्कीले मात्र आफ्नो राजनीतिक सफल गराउने र मुद्दा स्थापित गराउने शैलीको विकास हुँदै छ् । उदाहरण धेरै छन ।निर्मला हत्याकाण्ड को परिमाण नष्ट गर्नु र , अत्तरिया मा पत्रिका जबर्जस्ती खोसेर जलाउनु यस्तै परिपाटीका उदाहरण हुन ।
अध्यन विनाको घमण्डको बरबर्तामा देखिन्छ सरकार सपनाहरू हजार छन तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर जादै छ सरकार ! जनताकलाई सामान्य जीवन चलाउन गाह्रो छ । स्वास्थ, शिक्षा ,रोजगार सडक यातायात खाने पानी सुरक्षा जस्ता अधारभुत मौलिक हकको स्थिति दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदै छ् । बलात्कारका घटना र विदेश बाट लाश नाअएको दिनै छैन खाल्डाखुल्डी नभएको कुनै रोड नै छैन । एक दिन काम गर्ने कुनै कार्यलय नै छैन अनुशासन र शुसासन को नाम नै छैन । सपना रेल पानी जाहाज र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटिको गफमा मस्त छ् ।यो आवश्यक छैन भन्ने होइन तर तत्काल जनताको चिन्ता के मा छ् तेतातिर उपलब्धि शुन्य जस्तै छ् ।
जनताको इच्छा विपरीत इतिहास बिनाको निर्णय लिन आतुर छ । इतिहासको अध्यनले नै भविस्य सुनिश्चित गराउन्छ तर याहा लोकतन्त्रको नाममा मनपरि तन्त्र छ । गणेश , हनुमान र संपरणवादीको नेताकार्यकर्ता को चित्त बुझाउनमा वेश्त छ सरकार । प्रतिपक्षी एजेन्डा विहीन रमिते छ । जसको उदाहरण यस ७ न. प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न विषयमा स्पष्ट देखियो ।हजारौं सहिद लाखौं वेपत घाइते अपाङ्ग र तमानौ घरबार बिहिन नेपाली जनता अनि झन्डै दुई करोड असी लाख नेपाली जनताको योगदान बाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को मुलमर्म त बिर्से बिर्से तर ७ नम्बर प्रदेशको इतिहास सम्म पअनि अध्यन गरेन सरकारले !
नाम सुदुरपश्चिम रे संघीयता को पहिलो सरकार प्रदेश सरकार अनि विधायकहरुले पहिलो निर्णय गर्दा अलिकति पनि भविस्यको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने ? याहाको इतिहास र याहाको गरौवपुर्ण योगदान लाई त सम्झिनु पर्ने जसमा भविस्यका हाम्रा नानीहरू लाई गौरव हुन्थ्यो कि ? देश विदेश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा हाम्रो इतिहास साक्षी हुन्थ्यो कि ? हामी यो प्रदेशका वासिन्दा हौ जाहा सहिद दशरथ चन्द ठाकुर जन्मिए , र भिमदत्त जस्ता क्रान्तिकारी जन्मिए हामी त्याहा बासिन्दा हौ अपि शैपाल हिमाल देखि खप्तड जस्तो स्वर्ग छ हामी त्यो प्रदेशका बासिन्दा हौ त्रिपुरा सुन्दरी देखी शैलेश्वोरी जस्ता भक्ति पिठ छन , हामी त्यो प्रदेशका बासिन्दा हौ जाहा सेती माहाकाली जस्ता नदि बगेकी छन । हामी त्यो प्रदेशको बासिन्दा हौ जाहा बाट मानव संस्कार संस्कृति र नैतिकताको जन्म भएको थियो मानसखण्ड र हामी त्यो प्रदेशका बासिन्दा हौ ।जो कुनै दिन खलसांङ जस्तो शक्तिशाली राज्य थियोे । तर हाम्रा मुखिया ले र जनताका प्रतिनिधि ले राखे सुदुरपश्चिम नाम
जो नाम को अर्थ हुन्छ । अंग्रेजीमा (सुदुर ) remote the distant अनि नेपाली मा हुन्छ ( सुदुर ) आफ्नो पहुँच देखी धेरै टाढा अथवा पहुँच नभएको । यो नाम राजा महेन्द्र ले राखेका हुन जो समकालीन अवस्थामा वस्तुगत थियोे र नाम अनुसार काम पनि गरेर हामी यो स्थान छौ जो पंचायत निति अनुसार हामी पहुँच बाट धेरै टाढा थियौं । त्यही भएर राजा महेन्द्र लाई वस्तुवादी राजा मान्द्छ्न । तर आज हाम्रा नेता र सरकार को मत पनि ठ्याक्कै मिल्यो । जुँगा चल्यो कुरा बुझ्यो जनता लाटा छैन । हरेक उसका अध्यनशैली कार्यशैली बाट थाहा हुन्छ कि उसको नेत र नियती को बारेमा । आफुलाइ कम्युनिस्ट भन्न अधिक रुचाउने यो सरकार र हामी कार्यकर्ता हाम्रो कार्यशैली राजा महेन्द्र संग मिल्छ भन्ने काहीं हामी क्रान्तिकारी गफ गरेर लुटतन्त्र र जनताको भावाना विपरीत जादै त छैनौं कि त कम्युनिस्ट भन्ने हरु तपाईं हामीले इतिहास को अध्यन नै गरेका छैनौं भन्नु पर्यो । होइन भने रातो झण्डा भित्र जाआलि षड्यन्त्र जनता र कार्यकर्ता ले स्वीकार गर्दैनन् र गर्नु पनि हुदैन । परिवर्तनको नारामा पश्चयगामी निर्णय गर्दा सम्म हामी काहा छौ । हाम्रो प्रतिपक्षी काहा छ । काले काले मिलेर खाउ भाले खेलमा वेश्त कमिसन मा मस्त ।
नेपाली राजनीतिको चला विचित्र !
कार्यकर्ता मख्ख छन नेता पवित्र !
जय समृद्धि ! जय प्रदेश !!
बाबुरामको अमेरिका अनुभूति !
वामदेवको उम्मेदवारी लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र अनिष्टताको संकेत : बाबुराम भट्टराई